Learning English Myanmar https://www.learningenglishmyanmar.com The Best English Learning Website in Myanmar. Thu, 11 Apr 2019 04:15:50 +0000	en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.1.1 အတာအိုးအကြောင်းသိကောင်းစရာများ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba/ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba/#respond Thu, 11 Apr 2019 04:15:50 +0000 https://www.learningenglishmyanmar.com/?p=577
အတာအိုးဆိုတာ သြင်္ကန်တွင်းမှာ သိကြားမင်းက လူ့ပြည်ကို ဆင်းလာတယ်လို့ အယူရှိတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သိကြားမင်းကို ကြိုတာပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာ မကောင်းမှု တတ်နိုင်သမျှမလုပ်ဘဲ ကောင်းမှု ကုသိုလ်နဲ့ပဲမွေ့လျော် ကြပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ အတာအိုးနဲ့ အတူ အတာပန်းဆိုတာရှိတယ်။ အတာပန်းတွေကတော့…….. တနင်္ဂနွေဆို အ-ဥ -အုန်းရွက်၊သြဇာရွက် ၊ တနင်္လာအတွက်ဆို … က -ခ-ဂ-ဃ-င ထဲက ကန့်ကော်ပန်း၊ခရေ … အင်္ဂၤါဆို ဇီးရွက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးဆို ရွက်လှ၊ရေတမာ၊ ကြာသပတေးဆို မြေဇာ၊မာလကာရွက်၊ သောကြာဆိုသပြေပန်း၊ စနေဆို တမာရွက်၊ ဒန်းပန်း၊ အစရှိသဖြင့်…… နေ့ ၇ နေ့ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ၇ နေ့နံပန်းနဲ့ပါ။ တစ်ချို့ကလဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမူတည်ပီး ဒန်း၊ ဇီး၊ စသည်ဖြင့် ထည့်ကြတယ်။ သြင်္ကန် ၄ရက်လုံး […]
The post အတာအိုးအကြောင်းသိကောင်းစရာများ appeared first on Learning English Myanmar.
အတာအိုးဆိုတာ သြင်္ကန်တွင်းမှာ သိကြားမင်းက လူ့ပြည်ကို ဆင်းလာတယ်လို့ အယူရှိတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သိကြားမင်းကို ကြိုတာပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာ မကောင်းမှု တတ်နိုင်သမျှမလုပ်ဘဲ ကောင်းမှု ကုသိုလ်နဲ့ပဲမွေ့လျော် ကြပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ အတာအိုးနဲ့ အတူ အတာပန်းဆိုတာရှိတယ်။ အတာပန်းတွေကတော့……..
စနေဆို တမာရွက်၊ ဒန်းပန်း၊ အစရှိသဖြင့်…… နေ့ ၇ နေ့ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ၇ နေ့နံပန်းနဲ့ပါ။ တစ်ချို့ကလဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမူတည်ပီး ဒန်း၊ ဇီး၊ စသည်ဖြင့် ထည့်ကြတယ်။ သြင်္ကန် ၄ရက်လုံး အတာအိုးနဲ့ကြိုပီး နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ရောက်တော့ သဲဖြူ၊ ချည်ကြိုးတွေထပ်ဖြည့်ပီး အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်ရွတ်ကြတဲ့အခါ “အတာအိုး” နဲ့ “အတာပန်း” ကနေ “ပရိတ်အိုး” နဲ့ “ပရိတ်ပန်း” အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းပီး မိမ်တို့အိမ် ပတ်ပတ်လည်မှာ “ပရိတ်ပန်း” “ပရိတ်သဲ” တွေနဲ့ ကာရံပီး အန္တရာယ်ကင်းအောင် လုပ်တယ်လို့ အယူရှိတယ်။
ထို့နောက် ရှူံးတဲ့သူ ခေါင်းဖြတ်ခံကြေးဟု သတ်မှတ်ကာ လူ့ပြည်သို့ ဆင်းပြီး ထိုအချိန်က သီလ၊ သမာဓိနှင့် ပြည့်စုံသည့် ရသေ့ထံတွင် အဆုံးအဖြတ် ခံယူကြပါသတဲ့။ အဘိဉာဏ်ရ ရသေ့က ယခုအခါတွင် လူ့ပြည်တွင် တနင်္ဂနွေအစ စနေအဆုံး ၇-ရက်သာ ရှိတော့သည်ဟု အဆုံးအဖြတ်ပေးခဲ့လေသတဲ့။ ဗြဟ္မာမင်းလည်း သူ့ကတိအတိုင်း သူ၏ဦးခေါင်းကို အဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် ဖြတ်ပြီး သိကြားမင်းလက်သို့ ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။
ထိုဗြဟ္မာဦးခေါင်းပြတ်ကြီး သိကြားမင်းလက်ထဲသို့ ရောက်သည့်အခါ ဒီဗြဟ္မာဦးခေါင်းပြတ်ကြီးကို မြေပေါ်ချထားလျှင် ၇-နှစ် ကမ္ဘာမီးလောင်ပြီး မိုးခေါင်လိမ့်မည်၊ ရေတွင် ထားပါကလည်း သမုဒ္ဒရာ ၇-စင်းမှ ရေများ ခန်းခြောက်သွားလိမ့်မည်လို့ သိကြားမင်းက စဉ်းစားမိသတဲ့။ ဒါနဲ့ မြေမှာလည်း မထား၊ ရေသို့လည်း မပို့တော့ဘဲ နတ်သမီး ၇-ယောက်ကို တစ်ဦးလျှင် တစ်နှစ်စီ ဗြဟ္မာဦးခေါင်းကို ကိုင်ထားရန် တာဝန်ပေးလိုက်သတဲ့။
ထိုနတ်သမီးတွေရဲ့ တစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ ဗြဟ္မာဦးခေါင်းကိုင်ရန် အလွှဲအပြောင်းကို သင်္ကန္တလို့ ခေါ်ပြီး ထိုမှ ရွေ့လျော ဆင်းသက်ကာ သြင်္ကန်ဆိုတာ ဖြစ်လာပါသတဲ့။ ဒါကတော့ သြင်္ကန်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောတတ်တဲ့ ပုံပြင်ပါ။
မြန်မာပြည်မှာ တစ်နှစ်တစ်ခါ ထုတ်ဝေတဲ့ သြင်္ကန်စာများမှာလည်း ဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့ ဦးခေါင်းကို လွှဲပြောင်းပေးနေပုံကို ဖော်ပြလေ့ရှိတာ သတိပြုမိပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော သြင်္ကန်ဆိုတာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း အဓိပ္ပာယ်လို့သာ လွယ်လွယ် မှတ်လိုက်ကြပါစို့။
ရှေးမှတ်တမ်းများအရ ရေကစားပွဲတော်ကို ပထမဆုံး စတင်ခဲ့သည့် ဘုရင်မှာ ပုဂံခေတ်၊ နရသီဟပတေ့မင်းလက်ထက်တွင်ဟု သိရပါတယ်။ ထိုမင်းသည် ရေကစားပွဲတော်တွင် သူ၏မိဖုရား စောလုံကို စ,နောက်မိခဲ့ဖြင့် စောလုံမှ ထမင်းပွဲတွင် အဆိပ်ထည့်ကာ လုပ်ကြံသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရင်က အချိန်မီ သိရှိသဖြင့် အသက်မသေခဲ့ဘဲ မိဖုရားစောလုံကို မီးကျီးခဲရဲရဲတွင် မီးကင်သတ်စေခဲ့ပါတယ်။ သြင်္ကန်အစ ကြေကွဲစရာ မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုဟုသာ ဆိုပါရစေ။
ရှေးပညာရှိကြီးတွေဟာ အတာနှစ်ဦးမှာ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် ဓလေ့တချို့ သတ်မှတ်ထားတာ မှတ်သား သတိပြု ဆင်ခြင်ဖွယ် တွေ့ရပါတယ်။အဲဒါတွေက သြင်္ကန်အခါမှာ ……
သြင်္ကန်တွင်းသာ မဟုတ်ဘဲ ဘယ်အချိန်အခါမဆို မကောင်းသော အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ အကြံအစည်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ရပါတယ်။
“မဟာသြင်္ကန်”နှင့် တွဲဖက်၍ “အတာ”၊ “အတာစား” ဟူသော ဝေါဟာရတို့ကို ပြောဆို သုံးစွဲကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
“အတာ”ဟူသည် လောကီအလို ‘ဒဏ်သင့်ခြင်း’ ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ‘အန္တ-အဆုံး’ဟူသော ပါဠိပုဒ်မှ ‘အတာ’ဖြစ်လာသည်ဟုလည်း ကြံဆကြပါတယ်။
ယင်းအလိုအားဖြင့် “အတာ”ဟူသည် ‘နောက်ဆုံးကာလ၊ အကျပိုင်းကာလ’ကို ဆိုလိုပါတယ်။
“အတာရက်”မှာ သြင်္ကန်အတက်ရက် ဖြစ်၏။ နှစ်တစ်နှစ်၏ နောက်ဆုံးရက်ပင် ဖြစ်တယ်။ သြင်္ကန်အတက်ရက်နှင့် မွေးနေ့တိုက်ဆိုင်သူများသည် “အတာသင့်”သူများ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကိုပင် အတာစားသည်ဟု ပြောဆို သုံးစွဲနေကြပါသေးတယ်။
အတာစားသည့် နေ့နံသားသမီးတို့သည် အတာတက်မည့်အချိန် အတိအကျတွင် “အတာစား”ရပါတယ်။ အတာစားဟူသည် အတာတက်ချိန်မှာ ကောင်းမွန် သန့်ရှင်းစွာ ဝတ်စား ဆင်ယင်လျက် အရှေ့တောင်အရပ်သို့ မျက်နှာမူကာ ပူဇော်ရိုသေထိုက်သူများကို လှူဖွယ်ပစ္စည်းတို့ဖြင့် ဆက်ကပ်ခြင်း လှူဒါန်းပူဇော်ခြင်း ပြုကြရတယ်လို့ ဖော်ပြထားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
အတာစားခြင်း၏ အကျိုးကား … အတာပုည၊ ကုသလကို၊ ပြုကြကုန်သော၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် “အတာကမ္မံ ကရောန္တဿ မဟာဘောဂံ မဟာသုခံ မဟပ္ဖလံ စတုဒ္ဒိသံ ဝေရီဇေယျသုမင်္ဂလံ”ဟု ရှေးပညာရှိတို့ ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်နှင့်အညီ ထိုကဲ့သို့ ရတနာသုံးပါး စသည်တို့အား လှူဒါန်း ပူဇော်ကြသော သူတို့သည် ကောင်းကျိုးချမ်းသာ မင်္ဂလာတရား ပြန့်ပွားတိုးတက် ပြည့်စုံကုန်ရာသည် … ဟု မှတ်သားရဖူးပါတယ်။
အတာအိုးကို သြင်္ကန်ကို စောင့်ကြိုသည့်အနေဖြင့် သြင်္ကန်မကျခင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရသည်။ (၇)ရက်သားသမီးတို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ ပန်း ၇-မျိုးဖြစ်စေ၊ အညွန့် ၇-မျိုးဖြစ်စေ ရေပြည့်အိုးမှာ ထိုးလေ့ ထည့်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
အညာနယ်ဘက်မှာတော့ သြင်္ကန်ကျသည်နှင့်တပြိုင်နက် အတာအိုးမှ ရေကို သွန်၍ သြင်္ကန်ပန်း၊ သြင်္ကန်အညွန့်တို့ကို အိမ်ဦး ဝင်းထရံ စသည်တို့၌ ထိုးစိုက်ကာ နှစ်သစ်မှာ ဘေးရန်ကင်းကွာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာဖို့ ဆုတောင်းဆုယူ ပြုကြလေ့ရှိပါသည်။
Credit: Myanmar Gazatte
• (အထက်ဖော်ပြသည်များကတော့ ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံ ကဲ့သို့ဖြစ်နေသောကိစ္စရပ်များသာဖြစ်ပါသည်။)
]]> https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba/feed/0အမြဲတမ်း အကြွေးတင်မနေဖို့ ရှောင်သင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက် https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8-%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%96%e1%80%ad/ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8-%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%96%e1%80%ad/#respond Thu, 04 Apr 2019 11:14:05 +0000 https://www.learningenglishmyanmar.com/?p=572
အမြဲတမ်း အကြွေးတင်မနေဖို့ ရှောင်သင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက် အကြွေးတွေ အမြဲတမ်းမတင်နေဖို့ ရှောင်သင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ- ၁ – အလေ့အကျင့် ပိုက်ဆံချွေတာတယ်ဆိုတာ အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါ။ သင့်မှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ မွေးယူရမယ့် အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၂ – ကွဲကွဲပြားပြား ပိုက်ဆံဆိုတာ သုံးရတဲ့အရာပါ။ သင်လိုချင်တာကိုရဖို့ အရင်းအနှီးပြုရတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဘာလိုချင်တယ်၊ သင်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြားမသိရင် ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ရှုပ်ထွေးနေဦးမှာပါပဲ။ ၃ – မဝယ်နဲ့ ငှားလို့ရတဲ့အချိန်မှာ ဝယ်တာ။ ခဏပဲအသုံးဝင်မယ့် ပစ္စည်းကို တစ်သက်လုံးသုံးလို့ရမယ့် ပစ္စည်းလို ဝယ်လိုက်တတ်ကြပါတယ်။ နောက်လည်း အသုံးဝင်လာမယ်လို့ ဆင်ခြေပေးတတ်ကြပါတယ်။ နောက်လည်း ဘယ်နှစ်ကြိမ်အသုံးဝင်မှာလည်း ဆိုတာလည်း […]
The post အမြဲတမ်း အကြွေးတင်မနေဖို့ ရှောင်သင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက် appeared first on Learning English Myanmar.
အကြွေးတွေ အမြဲတမ်းမတင်နေဖို့ ရှောင်သင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ-
၁ – အလေ့အကျင့်
ပိုက်ဆံချွေတာတယ်ဆိုတာ အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါ။ သင့်မှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ မွေးယူရမယ့် အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂ – ကွဲကွဲပြားပြား
ပိုက်ဆံဆိုတာ သုံးရတဲ့အရာပါ။ သင်လိုချင်တာကိုရဖို့ အရင်းအနှီးပြုရတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဘာလိုချင်တယ်၊ သင်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြားမသိရင် ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ရှုပ်ထွေးနေဦးမှာပါပဲ။
၃ – မဝယ်နဲ့
ငှားလို့ရတဲ့အချိန်မှာ ဝယ်တာ။ ခဏပဲအသုံးဝင်မယ့် ပစ္စည်းကို တစ်သက်လုံးသုံးလို့ရမယ့် ပစ္စည်းလို ဝယ်လိုက်တတ်ကြပါတယ်။ နောက်လည်း အသုံးဝင်လာမယ်လို့ ဆင်ခြေပေးတတ်ကြပါတယ်။ နောက်လည်း ဘယ်နှစ်ကြိမ်အသုံးဝင်မှာလည်း ဆိုတာလည်း မေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ ခဏပဲသုံးရမယ့်ပစ္စည်းကို ငှားသုံးတာက အကောင်းဆုံးပါ။
၄ – အလွယ်လမ်း
အောင်မြင်မှုတစ်ခုမှာ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း ကြိုးစားခဲ့လို့ရတာဖြစ်ပြီး ၁ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသာ လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အလွယ်လမ်းလိုက်ဖို့ ပိုက်ဆံမသုံးပါနဲ့။
၅ – ခဏသာအတွက်
ပျော်ရွှင်မှုခဏပဲရပြီး ပိုက်ဆံလွယ်လွယ်ကုန်သွားတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို လျှော့ချပါ။ လောင်းကစား၊ အရက် စတဲ့အကျင့်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၆ – မတတ်နိုင်ဘဲဝယ်တာ
လောလောဆယ်ငွေကြေး မတတ်နိုင်သေးတဲ့ပစ္စည်းကို ပိုက်ဆံချေးပြီး မဝယ်ပါနဲ့။
၇ – ရှေ့နောက်မကြည့်
ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်ရင် ဒီနေ့သာယာဖို့ပဲ တွေးပြီး မနက်ဖြန်အကြောင်းမတွေးတာမျိုးကို ပြင်ပါ။
]]> https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8-%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%bd%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%96%e1%80%ad/feed/0သုံညဘဝနေ တရုတ်ပြည်၏ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသူ ဂျက်မား၏ အတုယူဖွယ် ဘဝဇာတ်ကြောင်း https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%8a%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%b1-%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%81%8f-%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%99/ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%8a%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%b1-%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%81%8f-%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%99/#respond Thu, 04 Apr 2019 06:51:28 +0000 https://www.learningenglishmyanmar.com/?p=564
Jack Maဟာ သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကို အသေးစိတ်ပြောပြလေ့တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကလေးဘဝကတည်းကကြိုးစားမှုတွေ သင်ခန်းစာယူခဲ့ရပုံတွေကိုတော့ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။ သူဟာ ငယ်ငယ်ကလေးတည်းက အခြားသူတွေနဲ့မတူတဲ့ အတွေအခေါ်တွေရှိခဲ့တယ်။English စာကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။English ကိုကြိုးကြိုးစားစားလေ့လာခဲ့တယ်။သူဟာအသက် (၁၂)နှစ်လောက်မှာ သူတို့မြို့ရဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေလာရောက်တည်းခိုတဲ့ Hangzhou Hotelဆီ နံနက်တိုင်း(၄၅)မိနစ်ခန့်စက်ဘီးစီး သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုFree Tour Guideလုပ်ပေးပြီးအင်္ဂလိပ်စကားပြောကို၉နှစ်ခန့်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ အဲ့သည်အချိန်ကသူတို့မြို့မှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းလည်းမရှိသေးဘူး။ သူ့မှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးမယ့်ဆရာလည်းမရှိခဲ့ဘူး။မိဘတွေကလည်း သူ့ကိုသေသေချာချာသင်ပေးနိုင်လောက်အောင် ပညာတတ်တွေမဟုတ်ခဲ့ဘူး။သူ့ရဲ့ English Skillတွေတိုးတက်ဖို့ သူကိုယ်တိုင်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်က Englishကိုသူလေးလေးနက်နက်လေ့လာခဲ့တာ ဟာခုလို ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ရှိခဲ့လို့မဟုတ်။ Englishဟာ နောင်တစ်ချိန် အသုံးဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့အသိလေးကြောင့်သူလေ့လာခဲ့တာ။နောက်ပိုင်းမှာ သူဟာ ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခု၌အင်္ဂလိပ်စာဆရာ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယခုဆိုရင် သူရဲ့အင်္ဂလိပ်လို ဟောပြောမှုတွေဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများအပြားမှာ အလွန်ပဲထင်ရှားကျော်ကြားနေပြီဖြစ်တယ်။ သူဟာကျောင်းစာဘက်မှာတော့သိပ်မတော်ခဲ့ပါဘူး။သာမန်ကျောင်းသားတွေ (၅)နှစ်နှင့်အောင်တဲ့မူလတန်းကိုသူက(၇)နှစ်တက်ခဲ့ရတယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို(၃)ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျပြီးမှ နောက်ဆုံးလေးကြိမ်မြောက်မှာမှ အောင်ခဲ့တယ်။ပထမ အကြိမ်ကျတုန်းကဆိုရင် သူ့ရဲ့ သင်္ချာရမှတ်ဟာ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိဘတွေဟာ သူ့ကိုဘွဲ့ရပညာတတ်တစ်ယောက် […]
The post သုံညဘဝနေ တရုတ်ပြည်၏ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသူ ဂျက်မား၏ အတုယူဖွယ် ဘဝဇာတ်ကြောင်း appeared first on Learning English Myanmar.
Jack Maဟာ သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကို အသေးစိတ်ပြောပြလေ့တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကလေးဘဝကတည်းကကြိုးစားမှုတွေ သင်ခန်းစာယူခဲ့ရပုံတွေကိုတော့ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။
သူဟာ ငယ်ငယ်ကလေးတည်းက အခြားသူတွေနဲ့မတူတဲ့ အတွေအခေါ်တွေရှိခဲ့တယ်။English စာကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။English ကိုကြိုးကြိုးစားစားလေ့လာခဲ့တယ်။သူဟာအသက် (၁၂)နှစ်လောက်မှာ သူတို့မြို့ရဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေလာရောက်တည်းခိုတဲ့ Hangzhou Hotelဆီ နံနက်တိုင်း(၄၅)မိနစ်ခန့်စက်ဘီးစီး သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုFree Tour Guideလုပ်ပေးပြီးအင်္ဂလိပ်စကားပြောကို၉နှစ်ခန့်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။
အဲ့သည်အချိန်ကသူတို့မြို့မှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းလည်းမရှိသေးဘူး။ သူ့မှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးမယ့်ဆရာလည်းမရှိခဲ့ဘူး။မိဘတွေကလည်း သူ့ကိုသေသေချာချာသင်ပေးနိုင်လောက်အောင် ပညာတတ်တွေမဟုတ်ခဲ့ဘူး။သူ့ရဲ့ English Skillတွေတိုးတက်ဖို့ သူကိုယ်တိုင်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်က Englishကိုသူလေးလေးနက်နက်လေ့လာခဲ့တာ ဟာခုလို ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ရှိခဲ့လို့မဟုတ်။
Englishဟာ နောင်တစ်ချိန် အသုံးဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့အသိလေးကြောင့်သူလေ့လာခဲ့တာ။နောက်ပိုင်းမှာ သူဟာ ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခု၌အင်္ဂလိပ်စာဆရာ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယခုဆိုရင် သူရဲ့အင်္ဂလိပ်လို ဟောပြောမှုတွေဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများအပြားမှာ အလွန်ပဲထင်ရှားကျော်ကြားနေပြီဖြစ်တယ်။
သူဟာကျောင်းစာဘက်မှာတော့သိပ်မတော်ခဲ့ပါဘူး။သာမန်ကျောင်းသားတွေ (၅)နှစ်နှင့်အောင်တဲ့မူလတန်းကိုသူက(၇)နှစ်တက်ခဲ့ရတယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို(၃)ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျပြီးမှ နောက်ဆုံးလေးကြိမ်မြောက်မှာမှ အောင်ခဲ့တယ်။ပထမ အကြိမ်ကျတုန်းကဆိုရင် သူ့ရဲ့ သင်္ချာရမှတ်ဟာ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိဘတွေဟာ သူ့ကိုဘွဲ့ရပညာတတ်တစ်ယောက် ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့ကြတယ်။
သူ့ရဲ့ဦးနှောက်အတွေးအခေါ်တွေကို သူများနဲ့မတူဘဲစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်အောင် သူဟာ ငယ်ကတည်းကလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ သူဟာကျောင်းမှာသင်ရတဲ့ သင်ခန်းစာတွေထဲမှ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေဆီကကြားရတဲ့ အရာတွေဟာ ကွဲပြားခြားနာနေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဥပမာ ကျောင်းစာအုပ်ထဲက အမေရိကန်နိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားသား
တွေပြောပြတဲ့ အမေရိကန်ဟာ ကွဲပြားနေတာသူသတိထားမိတယ်။ အမှားအမှန်ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်ကို အသုံးပြုတတ်လာခဲ့တယ်။တစ်ချို့သောသူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေ ဟာ ဆရာ၊ဆရာမတွေ၊မိဘတွေနဲ့ မတူဘဲ လုံးဝကို ကွဲပြားနေတတ်တယ်။ဘယ်လို အကြောင်းအရာကိစ္စကိုမဆို လူအများကအမှန်ဆိုတိုင်း သူကလိုက်ပြီးအမှန်မလုပ်ဘူး၊ အမှားဆိုတိုင်းလည်းလိုက်ပြီး အမှားမလုပ်ဘူး၊၊
လူအများကအကောင်းဆိုတိုင်းလည်း လိုက်မကောင်းဘူး၊အဆိုးဆိုတိုင်းလည်း လိုက်မဆိုးဘူး။တစ်စုံတစ်ယောက်က အကြောင်အရာတစ်ခုကို ပြောလိုက်တဲ့အခါသူ့ကိုယ်ပိုင် ဦးနှောက်နဲ့ နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်ခန့်အချိန်ယူစဉ်းစားလိုက်တယ်။ မှန်သလား၊မှားသလား၊ကောင်းသလား၊ဆိုးသလားဆိုတာထက် အခြားသူတွေနဲ့မတူအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ရမလဲ၊မတူအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကို သူအမြဲစဉ်းစားခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီလို စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်မှုဟာသူ့ရဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်လေ့ကျင့်ယူခဲ့တယ်။ သူ့ကိုအောင်မြင်စေတဲ့ငယ်ကတည်းကအလေ့အကျင့်တစ်ခုလည်းရှိခဲ့တယ်၊၊အဲ့ဒါကတော့ ဘာပဲလုပ်လုပ်မလျှော့သော ဇွဲနဲ့ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ပါပဲ။သူဟာ စာမေးပွဲတွေ အကြိမ်ကြိမ်ကျတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှ လက်မလျှော့ခဲ့ဘူး။ တစ်ခါနဲ့မရရင်နှစ်ခါကြိုးစားတယ်၊နှစ်ခါနဲ့ သုံးခါ၊သုံးခါနဲ့မရရင် အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားတယ်။
သူ့ရဲ့ငယ်ကတည်းက အရှုံးမပေးတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ ဆင်းရဲတဲ့ ဘဝကနေပြီး အခုလို ကြိယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဘီလီယံနာကြီး ဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲကတစ်ခုပဲ။ပြီးတော့ သူဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက လူတွေကိုကူညီတတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အကျိုးအမြတ်လိုချင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ ကူညီတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ လူတွေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် စေတနာနဲ့ ကူညီတာမျိုး ငယ်ကတည်းကသဘောကျနှစ်သက်ခဲ့တယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အကျင့်တွေကို သူဟာငယ်ကတည်းကလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာဟာ ခုလို ကြွယ်ချမ်းသာချင်လို့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး….ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပါပဲ..တဲ့..။ ။
Writer~Thu Rein (Daily Hot News)
]]> https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%8a%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%b1-%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%81%8f-%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%99/feed/0လူချမ်းသာတွေ လိုက်နာတဲ့ ပိုက်ဆံချွေတာရေး နည်းလမ်း ( ၃ ) ခု https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1-%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7/ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1-%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7/#respond Wed, 03 Apr 2019 10:55:59 +0000 https://www.learningenglishmyanmar.com/?p=559
ပိုက်ဆံဟာ ချွေတာသုံးပြီး းမဖြုန်တီးသရွေ့ မိမိတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ၊ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေအားလုံးဟာ နေ့စဉ်သုံးစွဲဖို့ ငွေကြေးတွေကို ရှာဖွေရင်းနဲ့ အချိန်တွေ အများကြီး ကုန်လာကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဂရုစိုက်ရမှာကတော့ လူချမ်းသာ ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုများ ချွေတာသုံးသလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခါ ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ချမ်းသာတဲ့လူတွေ လိုက်နာလေ့ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံချွေတာနည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ၂၄ နာရီ စည်းမျဉ်း ၂၄ နာရီစည်းမျဉ်းကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ သင်ပစ္စည်းတခုခုကို ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် တရက်လောက် သေချာစဉ်းစားဖို့ပါ။ လိုချင်တာလား၊ လိုအပ်တာလား ဆိုတာကို သေချာသိအောင် လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်မှာ ရှိနေတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အဲဒီပစ္စည်းကို ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါ့မလား […]
The post လူချမ်းသာတွေ လိုက်နာတဲ့ ပိုက်ဆံချွေတာရေး နည်းလမ်း ( ၃ ) ခု appeared first on Learning English Myanmar.
]]> https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%b1-%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7/feed/0ကွမ်းယာရောင်းသူဘဝမှ အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီး ဦးအောင်ဆန်းဝင်းဘဝသို့ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%99%e1%80%be-%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%ac/ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%99%e1%80%be-%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%ac/#respond Wed, 03 Apr 2019 06:28:40 +0000 https://www.learningenglishmyanmar.com/?p=552
လွန်ခဲ့သော ( ၂၅ ) နှစ်ခန့် စဉ်းကူးမြို့နယ် ဇရပ်ကွင်း ဆိုတဲ့ ရွာငယ်လေး၏ ဖုန်တစ်လိမ့်လိမ့် ထနေတဲ့ မြေသားလမ်းကလေးဘေးတွင် ကွမ်းယာရောင်းနေသောကောင်လေးတစ်ယောက်က… ယခု ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာ ရွေဆိုင်(၅)ဆိုင်နှင့် ရွှေသန့်စင်လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်… ဆိုရင် စာဖတ်သူအံ့အားသင့်သွားစရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေကြားမှာ ယနေ့အထိ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြု့ပြောဆိုနေတဲ့ စကားပုံတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ” စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း ရောင်းဝယ်နေတုန်း ကွမ်းယာသည်က ကလန့်ကလန့်နဲ့ ” ။ စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း ရောင်းဝယ်နေတဲ့ကြားတဲ့ ကွမ်းယာသည်က ကလန့်လန့်လုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ ကွမ်းယာသည်မှ စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း ကုန်သည်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စိန်နှင့် ရွှေတို့သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်လည်း ISO 9001. 2008 ဆုကို ချီးမြင့်ခြင်းခံခဲရပြန်ပါတယ်။ […]
The post ကွမ်းယာရောင်းသူဘဝမှ အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီး ဦးအောင်ဆန်းဝင်းဘဝသို့ appeared first on Learning English Myanmar.
လွန်ခဲ့သော ( ၂၅ ) နှစ်ခန့် စဉ်းကူးမြို့နယ် ဇရပ်ကွင်း ဆိုတဲ့ ရွာငယ်လေး၏ ဖုန်တစ်လိမ့်လိမ့် ထနေတဲ့ မြေသားလမ်းကလေးဘေးတွင် ကွမ်းယာရောင်းနေသောကောင်လေးတစ်ယောက်က… ယခု ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာ ရွေဆိုင်(၅)ဆိုင်နှင့် ရွှေသန့်စင်လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်… ဆိုရင် စာဖတ်သူအံ့အားသင့်သွားစရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေကြားမှာ ယနေ့အထိ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြု့ပြောဆိုနေတဲ့ စကားပုံတစ်ခု ရှိပါတယ်။
” စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း ရောင်းဝယ်နေတုန်း ကွမ်းယာသည်က ကလန့်ကလန့်နဲ့ ” ။
စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း ရောင်းဝယ်နေတဲ့ကြားတဲ့ ကွမ်းယာသည်က ကလန့်လန့်လုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ ကွမ်းယာသည်မှ စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း ကုန်သည်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စိန်နှင့် ရွှေတို့သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်လည်း ISO 9001. 2008 ဆုကို ချီးမြင့်ခြင်းခံခဲရပြန်ပါတယ်။ ထိုသူဟာ ” အောင်သမာဓိ ” စိန်ရွှေရတနာရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ရွှေသန့်စင်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် “ဦးအောင်ဆန်းဝင်း” ဖြစ်ပါသည်။ သူဟာ မန္တလေးဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ရေး အသင်းရဲ့ ဒုဥက္ကဌ အဖြစ်လည်း တာဝန်ယူထားပါသည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အဖဦးထွန်းရွှေ နှင့် အမိဒေါ်ကြည်မြိုင်တို့မှ မန္တလေးတိုင်း မတ္တရာမြို့နယ် “ရေနံ့သာကျေးရွာ” တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး စဉ့်ကူးမြို့နယ် “လက်ပံလှရွာ” မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ပြီး မွေးချင်းခြောက်အနက် ဒုတိယမြောက်သား ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၃တွင် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်မော်စီ နှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး သားတစ်ယောက်နှင့် သမီးသုံးယောက် ထွန်းကားခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် “အောင်သမာဓိ” ရွှေသန့်စင်လုပ်ငန်းကို မန္တလေးမြို့၌ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ကို မန္တလေးမြို့တွင် ၃ ဆိုင်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂ ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည်။ ထို့အပြင် အခမဲ့ရွှေသင်တန်းကိုလည်း သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပေသည်။
ငယ်စဉ်က အင်မတန်ချု့ိတဲ့သော သူဆင်းရဲသား ဘဝတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ သူကျောင်းနေစဉ်အရွယ်မှာပင် အိမ်အလုပ်တွေကို မနားမနေကူလုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ညဘက်ဆိုရင် ဓားသွေး၊ မနက် ၄ နာရီ အိပ်ရာမှထပြီး ရွာအနီးရှိ တောထဲသို့ ထင်ခုတ်ထွက်ရတယ်။ ညနေ ၅ နာရီအချိန်လောက်မှသာ အိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ည ၁၀ နာရီကျော် ၁၂ နာရီမှာ အိပ်ရာထပြီး မိခင်ဖြစ်သူ မိုးကုတ်သို့သွားရောင်းမယ့် မျှစ်နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးသေတ္တာများကို ကားပေါ်သို့ ထမ်းတင်ပေးရပြန်ပါတယ်။
အသက် ၄ နှစ်ခွဲ ၅ နှစ်အရွယ်တွင် မိဘများက ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် ဥုးလက္ခဏ ထံတွင် အပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။ မူလတန်းကျောင်းသားဘဝကို ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပညာသင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်၏ စည်းကမ်းကြီးမှုနှင့် ဆိုဆုံးမမှုတို့ကိုလည်း ယနေ့အထိ မမေ့သေးကြောင်း သူက ယခုလိုဆိုပါတယ်… ဆရာတော်၏ စည်းကမ်းကြီးမှုနှင့် ဆိုဆုံးမမှုတို့ကို ယခုအချိန်ထိပင် ကျွန်တော် မှတ်မိနေသေးသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မနက်လင်းသောအခါ ဆွမ်းခံထွက်ကြရတယ်။ ဆွမ်းခံထွက်ရာတွင် အိမ်က ဆွမ်းချိုင့်လည်း ဝင်ယူရသေးသည်။ နေ့ခင်းနေ့လည်တွင် ကျောင်းစာနှင့် တရားစာများသင်ရပြီး နေ့ခင် တစ်ရေးအိပ်ကြရသည်။ ညနေဘုရားဝတ်မတက်မီ ကျောင်းသားအားလုံး လက်အုပ်ချီ မတ်တပ်ရပ်ပြီး တန်းစီကာ အိမ်စာလုပ် မလုပ် စစ်ဆေးပြီး မလုပ်တဲ့သူများက ဆရာတော်ရိုက်တာ ခံကြရသည်။
ညပိုင်း ဘုရားဝတ်တက်ရင်လည်း ဘေးအိမ်က သူငယ်ချင်းကြားအောင် အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ဝတ်တက်ရသေးသည်။ နောက်နေ့တွင် ဆရာတော်က ဘုရားဝတ်မတက်သည့် သူများကို ကြိမ်လုံးဖြင့် ရိုက်လေ့ရှိသည်။ တစ်နေ့တွင် ကျွန်တော်ဘုရား ဝတ်မတက်ဘူးဟု တိုင်သောကြောင့် ဆရာတော့်ကြိမ်းလုံးဖြင့် အစင်းရာထင်အောင် အရိုက်ခံလိုက်ရသည်။ တိုင်သည့် ကျောင်းသားကို ကျွန်တော်မသိလိုက်ရပေ။ ဆရာတော်ထံတွင် ၆ လမျှသာနေခဲ့ရသော်လည်း ဆရာတော်ကို ကြောက်ရွံ့လေးစားခဲ့ရသည်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် ယနေ့တိုင် အရိုးထိတိုင် စွဲနေသေးသည်။ ဆရာတော်က ငှက်ပျောသီးဆိုရင်လည်း သုံးပိုင်း ပိုင်းပြီး တစ်ပိုင်းစားရသည်။ ငှက်ပျောသီးတစ်ပိုင်း စားရသည့် အရသာ… ကျောကော့အောင် အရိုက်ခံရသည့် ခံစားမှုနှင့် ဆရာတော်၏ စည်းကမ်းကြပ်မတ်မှုများ၏ ကျေးဇူးတို့က ကျွန်တော့်ဘဝအတွက် အမှတ်ရစေမည့် အရာများပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ကို တစ်ရွာလုံးက လေးစားကြည်ညိုကြသည်။ ရိုက်နှက်ဆုံမသည့်အတွက်လည်း မိဘများက ယခုခေတ်လိုမျိုး စောဒကမတက်ရဲပေ။
ဆယ်တန်းမအောင်သည်မှာ ကျွန်တော့်ဘဝအတွက် အခက်အခဲတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ပံလှကျောင်းတွင် အလယ်တန်းအထိ သင်နိုင်သော်လည်း ငါးတန်းနှင့် ခြောက်တန်းအထိသာ ဆရာပြည့်စုံမှုနှင့် သင်နိုင်သည်။ ခုနှစ်တန်းရောက်သည့် အချိန်တွင် ကျောင်းဆရာ မပြည့်စုံပေ။ တစ်ကျောင်းလုံးတွင် ကျောင်းဆရာ ( ၂ ) ယောက် သာရှိသည်။ သချာၤနှင့် ကျန်ဘာသာ အားလုံးကိုသင်ခဲ့ရပြီး အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးမည့် ဆရာမှာ မရှိပေ။ ကံကောင်းစွာဖြင့် ( ၈ ) တန်း ဖြေခါနီး နှစ်လလောက်အလိုတွင်းမှ နောက်ထပ်ဆရာနှစ်ယောက် ထပ်ရောက်လာသည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ကျန်ဘာသာအားလုံးကို သင်ပေးပြီး စာမေးပွဲဖြေခါနီး တစ်လလောက် အလိုတွင်မှ အင်္ဂလိပ်စာအတွက် အဓိကပုံသေနည်းများကိုသာ သင်ခဲ့ရသည်။ ကံကောင်းစွာဖြင့် (၈) တန်းကို အစိုးရစစ်ဖြင့် ခက်ခက်ခဲခဲအောင်သွားခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက အလယ်တန်းပညာရေး ရှားပါးသည့်အချိန်ဖြစ်သည့်အတွက် (၈)တန်း ကို အောင်သွားခဲ့သော်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် အခြေခံ မရှိခဲ့ပေ။
အလယ်တန်းကနေ အထက်တန်းကို ရောက်သွားသော အခါတွင် အထက်တန်းကို လက်ပံလှရွာမှ ၅ မိုင်းဝေးသော စဉ့်ကူးမြို့သို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ကျောင်းတက်ခဲ့ရသည်။ အများနည်းတူ စက်ဘီးမစီးနိုင်လို့ ငါးမိုင်ခရီးကို နှစ်နာရီလောက် လမ်းလျှောက်ပြီး ကျောင်းတက်ခဲ့ရသည်။ ဆယ်တန်းကျောင်းသာဘဝတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ထမင်းချိုင့် မပါသွားခဲ့သည်လည်း ရှိခဲ့ဖူးသည်။ (၈)တန်းကို ခက်ခက်ခဲခဲအောင်ပြီး… (၉)တန်း ရောက်သောအခါ Physics, Chemistry တို့ကို သင်ရသည့်အခါတွင် အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံ မပါသည့်အတွက် ဆယ်တန်းအောင်ရန် ခဲယဉ်းသွားခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်စာကို မပိုင်ခဲ့တာတွေ၊ ကျူရှင်ရှိလည်း တက်ရန် မတက်နိုင်ခဲ့သောကြောင့် ဆယ်တန်းရောက်သောအခါ ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဆယ်တန်းမအောင်ခဲ့ပေ။ (၉)တန်းကတည်းက စာမလိုက်နိုင်ခဲ့သောကြောင့် မဖြေခင် ဆယ်တန်းကျမည်ကို ကြိုသိနေခဲ့သည်။ ဆယ်တန်းပြန်ဖြေရမည့် စရိတ်ကလည်း အကုန်အကျများသောကြောင့် ပြန်မဖြေတော့ဘဲ အလုပ် လုပ်ရန် စဉ်းစားခဲ့သည်။
(၁၀)တန်းနှင့် (၁၀)တန်းအောင် အဆင့်ကို ဦးစားပေးခေါ်ယူနေသည့် စပါးတာလီစာရေးကို သွားဖြေခဲ့ပါသေးတယ်။ သို့သော်လည်း သူဟာ တာလီစာရေး စာမေးပွဲလည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ သူ့အတွက် အဲဒီ့အချိန်ဟာ ဆောက်တည်ရာရှာမရအောင် စိတ်ဓာတ်အကျခဲ့ဆုံးကာလ အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ ဘာလုပ်စရာ ရှိသေးလဲ… သူဘာလုပ်မလဲ…။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်လောက်မှာ သူနေထိုင်တဲ့ စဉ့်ကူးမြို့နယ်နှင့် ကပ်လျက်ရှိသည့် သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်တွင် ရွှေတောများ ခေတ်စားနေသည့် ကာလ… နွယ်ရုံ၊ ကျည်တောက်ပေါက်၊ ဇရပ်ကွင်း၊ ကွင်း(၃၀) စတဲ့ နေရာတွေမှာတော့ ရွှေကျင်ကြတဲ့ ရွှေတောတွေဟာ အင်မတန်နာမည်ကြီးပါတယ်။ လူတွေအများကြီး ရွှေတောတက် ရွှေကျင်ကြ၊ ရွှေရှာဖွေကြပါတယ်။ သူလည်း အများနည်းတူ လုပ်ကိုင်ချင်စိတ်တယ်။ သို့သော်…သူ့ပုံစံက ဗလမရှိ၊ ပိန်သေးသေးနဲ့ လူ့ဖလံလေးရယ်။
တူးဟယ်…ဆွဟယ်…ပိုးဟယ်…ထမ်းဟယ်… သူဘယ်လို လုပ်နိုင်မလဲ။ ဒီတော့ သူ့တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ငွေစကလေးနဲ့ ရွှေတောဝန်းကျင်မှာ ဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင် ထဖွင့်လိုက်တယ်။
Credit: ” အောင်အောင် ” …. ကွမ်းယာ…။
photo_ Aung San Win
]]> https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%80%e1%80%bd%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%99%e1%80%be-%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%ac/feed/0အောက်ခြေသိမ်းဘဝကနေ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်သူဌေးကြီး ဖြစ်လာတဲ့ ဦးဇော်ဇော် https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%80%e1%80%94%e1%80%b1-%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba/ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%80%e1%80%94%e1%80%b1-%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba/#respond Wed, 03 Apr 2019 04:36:44 +0000 https://www.learningenglishmyanmar.com/?p=544
အပေါင်းအသင်းဆန့်တဲ့ သူဌေး (သို့) ဦးဇော်ဇော် ဦးဇော်ဇော်ဆိုလိုက်တာနဲ ပြေးမြင်ကြမှာက ဧရာဝတီဘဏ်နဲ မြန်မာ့ဘောလုံးလောကပါ။ သူဟာ မြန်မာခရိုနီတွေ ကြားထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ဖြစ်တလို အများချီးကျူးဝေဖန်နေကြတဲ့ သူ ဖြစ်တလို နိင်ငံတကာကပါလေးစားခံနေရတဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ ပြောရင်လည်း မမှားပါဖူး။ ခရိုနီတွေထဲမှာလည်း အပေါင်းအသင်းအဆန့်ဆုံးလိုဆို့ရမှာပါ၊ သူဟာ အစီုးရအာဏာရှင်များနဲသာမက ထောင်ကျနိင်ငံရေး သမားတွေ လူမှုရေး စီးပွားရေးနယ်ပါယ်အသီးသီးက ထိပ်သီး အဆင့်ဖြစ်စေ အောက်ခြေဖြစ်စေ သိကွျှမ်းဝင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံးနေရာကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့် ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ ငယ်စဉ်ဘဝဟာလည်း ဖယောင်းလမ်းလို ပျော့ပြောင်းနေတာမဟုက်ခဲ့ပါ။ အခတ်အခဲတွေ ရုန်းကန်းမူတွေ ကျော်ဖြတ်လာပြီးမှ သူဌေးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်တလို ယခင်အာဏာရှင်တွေနဲ ပေါင်းစားသူဆိုပြီးလည်း ဝိုင်းသမုက်ခံနေရပေမယ့် သူဟာ ၈၈အရေးတော်ပုံကာလက တက်ကြွသောကျောင်းသားတစ်ဦးဆိုတာ […]
The post အောက်ခြေသိမ်းဘဝကနေ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်သူဌေးကြီး ဖြစ်လာတဲ့ ဦးဇော်ဇော် appeared first on Learning English Myanmar.
အပေါင်းအသင်းဆန့်တဲ့ သူဌေး (သို့) ဦးဇော်ဇော်
ဦးဇော်ဇော်ဆိုလိုက်တာနဲ ပြေးမြင်ကြမှာက ဧရာဝတီဘဏ်နဲ မြန်မာ့ဘောလုံးလောကပါ။ သူဟာ မြန်မာခရိုနီတွေ ကြားထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ဖြစ်တလို အများချီးကျူးဝေဖန်နေကြတဲ့ သူ ဖြစ်တလို နိင်ငံတကာကပါလေးစားခံနေရတဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ ပြောရင်လည်း မမှားပါဖူး။ ခရိုနီတွေထဲမှာလည်း အပေါင်းအသင်းအဆန့်ဆုံးလိုဆို့ရမှာပါ၊ သူဟာ အစီုးရအာဏာရှင်များနဲသာမက ထောင်ကျနိင်ငံရေး သမားတွေ လူမှုရေး စီးပွားရေးနယ်ပါယ်အသီးသီးက ထိပ်သီး အဆင့်ဖြစ်စေ အောက်ခြေဖြစ်စေ သိကွျှမ်းဝင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဇော်ဇော်ဟာ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်း ပေါ် – ရေ ကြည် နယ် သား ပါ ။ အဖေက အစိုးရ ဝန်ထမ်း ၊ အမေ က အိမ်ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားပီးတစ်ဘက်တစ်လမ်း အိမ်ဝင်ငွေရှာခဲ့ရတဲ့ မွေးချင်း ၆ ယောက် အ နက် သူ က အ ငယ် ဆုံး သား တစ် ဦး ဖြစ် ပါ တယ်။ ၁၉၈၈မှာ အရေးအခင်းဖြစ်တော့ သူ က ‘ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်မှာပါ။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်း ပီးနောက် အရေးအခင်းမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားသူတွေကို စစ်အစိုးရလိုက်လံဖမ်းတော့ သူလည်း ၄ လ လောက် ပြည်တွင်းမှာ ပုန်းရှောင် နေရသေးတဲ့ အချိန်မှာ သူအသက်ဟာ (၂၀)ဝန်းကျင်သာ ရှိပါသေးတယ်။
Credit: ဧရာဝတီ မီဒီယာ
]]> https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%80%e1%80%94%e1%80%b1-%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba/feed/0တစ်နေ့လျှင် (၁၅)မိနစ်ခန့် တရားထိုင်ကြည့်ပါ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%b7%e1%80%9c%e1%80%bb%e1%80%be%e1%80%84%e1%80%ba-%e1%81%81%e1%81%85%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%94%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%94%e1%80%b7/ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%b7%e1%80%9c%e1%80%bb%e1%80%be%e1%80%84%e1%80%ba-%e1%81%81%e1%81%85%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%94%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%94%e1%80%b7/#respond Tue, 02 Apr 2019 11:03:07 +0000 https://www.learningenglishmyanmar.com/?p=538
(၁၅) မိနစ်တရားထိုင်နည်း အမျိုးသားယောဂီများမှာ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်လျှက်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးယောဂီများမှာ မိန်းမထိုင် ကျုံ့ကံျု့ထိုင်လျှက်လည်းကောင်း ခါးကို မတောင့်လွန်း၊ မလျော့မကုန်းလွန်းဘဲ အလိုက်သင့်သလို တာရှည်ထိုင်နိုင်အောင် ထားပါ။ ဘယ်လက်ဝါးကို အောက်က ထား၍ ညာလက်ဝါးကို အပေါ်က ထားရမည်။ ယောဂီ၏ မျက်စိကိုလည်း တစ်ချို့မှိတ်လျှက်၊ တစ်ချို့ဖွင့်လျှက်၊ တစ်ချို့က မှေးမှေးထားလျှက် မိမိကြိုက်သလို ထိုင်နိုင်သည်။ နှာသီးဝအဖျားတွင် ထွက်လေဝင်လေတို့၏ ထိခတ်တိုးဝှေ့ရာ (ဖုသနဋ္ဌာန၊ နာသိက ကသိဏ)အရပ်ကလေးကို အသာအယာ သတိကပ်၍ ရှာဖွေရမည်။ တွေ့ရှိပါက ယခု လှုပ်သွားသည်မှာ ထွက်လေကြောင့်ဟု သိလျှင် လှုပ်သည်သိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ထွက်လေဟု သိမှတ်ထားပါ။ တစ်ဖန် ဝင်လေကြောင့် လှုပ်သွားသောအခါတွင်လည်း ဝင်လေဟု မှတ်လိုက်ခြင်းသည် အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်း တရား အားထုတ်သည် မည်ပါတော့သည်။ ဤပုံအတိုင်း […]
The post တစ်နေ့လျှင် (၁၅)မိနစ်ခန့် တရားထိုင်ကြည့်ပါ appeared first on Learning English Myanmar.
အမျိုးသမီးယောဂီများမှာ မိန်းမထိုင် ကျုံ့ကံျု့ထိုင်လျှက်လည်းကောင်း ခါးကို မတောင့်လွန်း၊ မလျော့မကုန်းလွန်းဘဲ အလိုက်သင့်သလို တာရှည်ထိုင်နိုင်အောင် ထားပါ။
ဘယ်လက်ဝါးကို အောက်က ထား၍ ညာလက်ဝါးကို အပေါ်က ထားရမည်။ ယောဂီ၏ မျက်စိကိုလည်း တစ်ချို့မှိတ်လျှက်၊ တစ်ချို့ဖွင့်လျှက်၊ တစ်ချို့က မှေးမှေးထားလျှက် မိမိကြိုက်သလို ထိုင်နိုင်သည်။
နှာသီးဝအဖျားတွင် ထွက်လေဝင်လေတို့၏ ထိခတ်တိုးဝှေ့ရာ (ဖုသနဋ္ဌာန၊ နာသိက ကသိဏ)အရပ်ကလေးကို အသာအယာ သတိကပ်၍ ရှာဖွေရမည်။
တစ်ဖန် ဝင်လေကြောင့် လှုပ်သွားသောအခါတွင်လည်း ဝင်လေဟု မှတ်လိုက်ခြင်းသည် အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်း တရား အားထုတ်သည် မည်ပါတော့သည်။
“အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်သော ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် သတိကပ်၍သာလျှင် ထွက်သက်ကို ဖြစ်စေ၏။ ထွက်သက်ကို ထုတ်၏။ သတိကပ်၍သာလျှင် ဝင်သက်ကို ဖြစ်စေ၏။ ဝင်သက်ကို ရှိုက်ရှူ၏”
(ဤကား သတိမြဲရာ ပထမာ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်)
“ထွက်သက်လေကို ရှည်ရှည်ထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် ရှည်ရှည်ထုတ်သည်ဟု ကောင်းစွာ သိ၏။ ဝင်သက်လေကို ရှည်ရှည်ရူသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် ရှည်ရှည်ရှုရှိုက်သည်ဟု ကောင်းစွာ သိ၏”
“ထွက်သက်လေကို တိုတိုထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုတိုထုတ်သည် ဟု ကောင်းစွာ သိ၏။ ဝင်သက်လေကို တိုတိုရှုရှိုက်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုတိုရှုရှိုက်သည်ဟု ကောင်းစွာ သိ၏”
(ဤကား ဒုမှာ တို ရှည်သိ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်)
“အလုံးစုံသော ထွက်သက်ဝင်သက်တို့၏ အစ၊ အလယ်၊ အဆုံး သုံးပါးလုံးကို ထင်ရှားစေလျှက် (ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ထိန်လင်းစေလျှက်) ထွက်သက်လေ ကို ထုတ်၏။ ဝင်သက်လေကို ရှိုက်ရှု၏” (ဤကား သုံးချက်သိမှာ တတိယာ သို့မဟုတ် လုံးစုံလင်းရာ တ-၌သာ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်)
“အရှိုက်အရှုပြင်းသောကြောင့် ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသော ထွက်သက်၊ ဝင်သက်လေတို့ကို ငြိမ်းအေးစေလျှက်၊ ချုပ်ပျောက်စေလျှက် ထွက်လေကို ထုတ်မည်၊ ဝင်လေကို ရှုရှိုက်မည်ဟု ကျင့်၏”
(ဤကား စ-မှာ ငြိမ်းစေဘိ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်)
“ရံခါအတွင်း၌ ထွက်လေဝင်လေဟူသော ကာယ သို့မဟုတ် ပဋိဘာဂဖြစ်သော အဿာသပဿာသကာယကို အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရမည်။ ရံခါအပြင်၌ (အပြင်ကို ထုတ်၍) ထွက်လေဝင်လေဟူသော ကာယ သို့မဟုတ် ပဋိဘာဂဖြစ်သော အဿာသပဿာသကာယကို အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်ပွားများ အားထုတ်ရမည်။ ရံခါအတွင်းအပြင် နှစ်ဌာနလုံး၌ ထွက်လေဝင်လေဟူသော ကာယ သို့မဟုတ် ပဋိဘာဂဖြစ်သော အဿာသပဿာသကာယကို အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရမည်။” (ဤသည်မှာ အာနာပါနသမထ လေးဆင့် လုံးကို ပေါင်း၍ဟောထားခြင်းဖြစ်ပါသည်)
“ထွက်သက်လေ၊ ဝင်သက်လေဟူသော ကာယ၌ ဖြစ်ခြင်းသဘောကို အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်၍ နေရာ၏။ ထွက်သက်လေ၊ ဝင်သက်လေဟူသော ကာယ၌ ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်၍လည်း နေရာ၏။ ထွက်သက်လေ၊ ဝင်သက်လေဟူသော ကာယ၌ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်၍လည်း နေရာ၏။”
(ဤကား အာနာပါနသမထကို အဦးမူ၍ ဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများရပုံ ဖြစ်ပါသည်)
“ထိုကဲ့သို့ အားထုတ်နေသော ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အား သတိတရား ထင်မြဲလာတော့သည်။ ထိုသတိ၏ သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ်ကို ရခြင်းငှါ၊ အဆင့်ဆင့် ရင့်ကျက်ခြင်းငှါ ဖြစ်လာလျှင် ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကို အမှီသဟဲပြုစရာမလိုဘဲ နေနိုင်စွမ်းရှိလာတော့သည်။ ထိုအခါ တစ်လောကလုံးတွင် သို့မဟုတ် ခန္ဓာငါးပါးဟူသော လောကတွင် `ငါ့ကိုယ်´ဟူ၍လည်းကောင်း၊ `ငါ၏ဥစ္စာ´ဟူ၍လည်းကောင်း တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ စွဲလမ်းခြင်းမရှိ အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်လေတော့သည်”
(ဤကား အာနာပါနသမထကို အဦးမူ၍ ဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများ အားထုတ်သော ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အား မဂ်ဖိုလ်ရ၍ အရိယာဖြစ်ပုံကို ပြပါသည်။)
အထက်ပါ ဖော်ပြချက်မှာ သတိပဋ္ဌာနသုတ်တော် တွင် မြတ်စွာဘုရား ရှင်ဟောကြားတော်မူသော အာနာပါနကျင့်စဉ် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
သမထဆိုတာ တနေရာတည်းကို စိုက်ရှုတာပါ၊ ဝိပဿနာဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံး ကို ဖြန့်ရှူတာလို့ မြေဇင်းဆရာတော်ကြီးက မိန့်တော်မူပါတယ။် သမထယာနိကသမားအတွက် စတုတ္ထအဆင့်ကျင့်စဉ်မှာ ပဋိဘာဂ အလင်းနိမိတ်ရရှိပြီး ဥပစာဆိုက်သွားပြီဆိုရင် ဝိပဿနာကို စတင်အား ထုတ်ရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဝိပဿနာရှုမှတ်ရာတွင် ရုပ်ကို ရှုမှတ်ရမှာလား၊ နာမ်ကို ရှုမှတ်ရမှလား လို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ စာပေမှာတော့ သမထယာနိကလမ်းစဉ်နဲ့ အားထုတ်သူများအတွက် နာမ်ကို ရှုမှတ်ပွားများရမယ်လို့ု ဆိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သမထ အားထုတ်မှု အားကောင်း၍ သမာဓိရင့်သန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ်။ ဝိပဿနာသက်သက်ရှုမှတ် ပွားများသူများသူတွေကိုတော့ ရုပ်ကို ရှုမှတ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ရှု့နည်း ၃ မျိုး
(၁) သမထအားထုတ်စဉ်က ရရှိခဲ့တဲ့ ပဋိဘာဂအလင်းနိမိတ်နဲ့ ခြေဖျားကနေ ငယ်ထိပ်အထိ တကိုယ်လုံး သတိမလွတ်စေဘဲ ရှုခြင်း။
(၂) ခြေဖျား မှ ချက် ၊ ချက်မှ လည်မျို လည်မျိုမှ ငယ်ထိပ် ထိ သုံးပိုင်း ပိုင်း၍ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ရှုမှတ်ခြင်း။
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအလိုက် ရှုနည်းသုံးမျိုး ကွဲပြားသကဲ့သို့ အရှုမှတ်ခံ အာရုံအလိုက် ရှုပွားရာ အစွန်းသုံးပါးကိုလည်း သိသင့်ပါတယ်။
(၁) မြင်ရင် မြင်တယ် ကြားရင် ကြားတယ် လို့မှတ်ခြင်း
(၂) မိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ငယ်ထိပ်ခြေတောက်လက်စတဲ့ နေ ရာတွေမှာ တဖွားဖွား ဖြစ်ပျက်နေ တာတွေကိုမှတ်ခြင်း
အရဟံ လို့ စိတ်ထဲက ဆိုပြီး ဝင်လေကို ရှူသွင်းပါ၊ အရဟံလို့ စိတ်ကဆိုပြီး ထွက်လေကို ပြန်ထုတ်ပါ၊ မိမိစိတ် ငြိမ်လာပြီ ဆိုရင် ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်တော် အရောက် အာရုံပြုပြီး ကိလေသာ ကင်းစင်တော် မူသော မြတ်စွာ ဘုရား ဆိုပြီး ဝင်လေ ထွက်လေ တိုင်းမှာ ရှူမှတ်ပေးပါ ၊ ဒီလိုနည်းနဲ့ အချိန် ရသလောက် ပွားများပေးပါ၊ ဘုရားရှင် ပေါ်မှာ ကြည်ညိုတဲ့ စိတ်တွေ များလာလေ တရားအလုပ် လုပ်ရတာ ချောမွေ့ လွယ်ကူလေ ပါပဲ။
အားလုံးသော သတ္တဝါတွေ ဝင်လေ တစ်ချက်… ချမ်းသာကြပါစေ ထွက်လေ တစ်ချက်. ဒီပုံစံနဲ့ မေတ္တာ ဘာဝနာ ပွားများ နိုင်ပါတယ်… ကိုယ် ပွားများ ချင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ပွားများ နိုင်ပါတယ် ဝင်လေ ထွက်လေ ကပ်ပြီး ပွားများ တာက သမာဓိ ပိုရ လွယ်ပါတယ်..
မရဏဿတိ (သေခြင်းတရား ဆင်ခြင်ပုံ)
တစ်နေ့ သေရမှာ ပါတကား.. တစ်နေ့ သေရမှာပါ တကားလို့ ဉာဏ်ကနေ မြင်လာအောင် ဉာဏ်မှာ ထင်လာအောင် ဆင်ခြင်ရပါမယ်.
အသုဘ ဘာဝနာ (စက်စုပ်ရွံရှာဖွယ် အဖြစ် ပွားများပုံ)
ငါ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ စက်စုပ် စရာကြီး ပါတကား… လို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သုံးပိုင်း ပိုင်းပြီး ပွားများရ ပါမယ်၊ ပထမဆုံး ပုခုံးအထက် ဦးခေါင်း ပိုင်းကို အရင် ကြည့်ရပါမယ်. မျက်စိကိုမှိတ် စိတ်ကို ဦးခေါင်းကို ပို့ထား ငါ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် စုက်ဆုပ် စရာကြီး ပါတကားလို့.. စိတ်ကဆိုပြီး ဦးခေါင်းထဲက ဦးဏှောက်တွေ အမြှေးတွေ မြင်လာတဲ့ အထိ ပွားများပေးပါ၊
ဒုတိယ.. ခါးကနေ ပုခုံးအထိ ခန္ဓာကိုယ် အလယ်ပိုင်းကို စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီး ငါ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ စက်ဆုပ် စရာကြီး ပါတကားလို့ စိတ်က ဆင်ခြင် ပွားများပြီး အတွင်းပိုင်း အူတွေ အသည်းတွေ ကျောက်ကပ်တွေ တစ်ပုံစီ တစ်ပုံစီ မြင်အောင် ကြိုစားပွားများပါ။
တတိယ.. ခါးအောက်ပိုင်းအကုန် ခြေထောက် အထိ စိုက်ကြည့် ပွားများပါ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို တွယ်တာလွန်း အားကြီးရင် တရား အလုပ်မှာ နှောင့်နှေး တတ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး ခေမာ ထေရီကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ တပ်မက်မှု ကင်းအောင် အသုဘ ဘာဝနာကို ပွားများ ကြရပါတယ်။
ဒီလေးမျိုးကို အချိန်ရတဲ့သူ ရက်များများ အားထုတ်မယ့် သူတွေ ကြိုးစား အားထုတ် ပွားများသင့် ပါတယ်၊ ရက်တွေ အများကြီး အချိန် မပေးနိုင် ရင်တောင် တရားမရှုမှတ်မိ အချိန်ပိုင်းလောက် ဗုဒ္ဓါန ုဿတိနဲ့ မေတ္တာ ဘာဝနာကို ၁၀-မိနစ် သို့မဟုတ် ၁၅-မိနစ် ပွားများ သင့်ပါတယ်၊ မေတ္တာ စွမ်းအားဟာ တကယ့်ကို ကြီးမားလှ ပါတယ်။
နေ့စဉ် (၁၅) မိနစ်ခန့် ဝိပဿနာမြတ်တရားအား ကျင့်ကြံပွားများ အားထုတ် နိုင်ကြပါစေ
]]> https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b1%e1%80%b7%e1%80%9c%e1%80%bb%e1%80%be%e1%80%84%e1%80%ba-%e1%81%81%e1%81%85%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%94%e1%80%85%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%94%e1%80%b7/feed/0“အမှန်” နှင့် “အမှား” https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%94%e1%80%ba-%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%ba-%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%ac%e1%80%b8/ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%94%e1%80%ba-%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%ba-%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%ac%e1%80%b8/#respond Mon, 01 Apr 2019 05:59:21 +0000 https://www.learningenglishmyanmar.com/?p=531
အမှန် နှင့် အမှား လမ်းဆုံတစ်ခုတွင် တွေ့ကြသည်။ အမှားက ဝတ်ကောင်း စားလှနှင့်ဖြစ်ပြီး အမှန်က စုတ်ပြတ် နေသည်။ အမှန်ကပြောသည် “ထမင်းဆာလိုက်တာ”၊ အမှားက ပြန်မေးသည် “ထမင်းဝယ်စားစရာ ပိုက်ဆံ မရှိဘူး မဟုတ်လား”၊ “ဟုတ်တယ်”၊ “ဒါဆို ငါနဲ့ လိုက်ခဲ့ မင်း ထမင်းကောင်းကောင်းစားရမယ်”၊ “တကယ်လား”၊ “တကယ်ပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ငါ မင်းကို တစ်ခု သတိပေးမယ်။ ငါဘာလုပ်လုပ် မင်း ဘာမှ မဝေဖန်နဲ့၊ ပြန်မမေးနဲ့၊ မင်းကို ပြန်ရှင်းပြစရာ အချိန်မရှိဘူး။ တိတ်တိတ်လေးထိုင်ပြီး စားစရာရှိတာစား၊ ဟုတ်ပြီလား”။ အမှားက ဦးဆောင်ပြီး စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ဝင်လိုက်သည်။ စားပွဲထိုးကို ခေါ်လိုက်ပြီး ကောင်းတာတွေ မှာသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် ဆာဆာနှင့် စားသောက်လိုက်ကြပြီး အမှားက […]
The post “အမှန်” နှင့် “အမှား” appeared first on Learning English Myanmar.
အမှန် နှင့် အမှား လမ်းဆုံတစ်ခုတွင် တွေ့ကြသည်။
အမှားက ဝတ်ကောင်း စားလှနှင့်ဖြစ်ပြီး အမှန်က စုတ်ပြတ် နေသည်။ အမှန်ကပြောသည် “ထမင်းဆာလိုက်တာ”၊ အမှားက ပြန်မေးသည် “ထမင်းဝယ်စားစရာ ပိုက်ဆံ မရှိဘူး မဟုတ်လား”၊ “ဟုတ်တယ်”၊ “ဒါဆို ငါနဲ့ လိုက်ခဲ့ မင်း ထမင်းကောင်းကောင်းစားရမယ်”၊ “တကယ်လား”၊ “တကယ်ပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ငါ မင်းကို တစ်ခု သတိပေးမယ်။ ငါဘာလုပ်လုပ် မင်း ဘာမှ မဝေဖန်နဲ့၊ ပြန်မမေးနဲ့၊ မင်းကို ပြန်ရှင်းပြစရာ အချိန်မရှိဘူး။ တိတ်တိတ်လေးထိုင်ပြီး စားစရာရှိတာစား၊ ဟုတ်ပြီလား”။
အမှားက ဦးဆောင်ပြီး စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ဝင်လိုက်သည်။ စားပွဲထိုးကို ခေါ်လိုက်ပြီး ကောင်းတာတွေ မှာသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် ဆာဆာနှင့် စားသောက်လိုက်ကြပြီး အမှားက သွားကြားထိုးနေသည်။ ထို့နောက် စားပွဲထိုးတစ်ယောက်ကို “ဟေ့ မင်းတို့ ဆိုင်ရှင်ကို သွားခေါ်စမ်း” အမှားက အထက်စီးလေးသံဖြင့် ဟောက်သလိုပြောလိုက်သည်။
အမှားက “ဘယ်လိုလဲ၊ ကျုပ် တစ်သောင်းတန် ပေးလိုက်တာ နာရီဝက်လောက်ကြာသွားပြီ။ ဒီမှာ ကျုပ်တို့ စားထားတာ တစ်သောင်း ဖြစ်နေလို့လား” ဆိုင်ရှင်က တွက်လိုက်သည်၊ “မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့ စားသောက်ထားတာ ၈၂၀၀ ကျပ်ပဲကျပါတယ်” “အေးလေ အဲဒါဆိုလည်း ပိုတဲ့ ပိုက်ဆံ ပြန်အမ်းလေ”၊ “လူကြီးမင်း ဘယ်သူ့ကို ပေးထားပါသလဲခင်ဗျာ”၊ “ဟို စားပွဲထိုးကိုလေ”၊ စားပွဲထိုး ကောင်လေးကို ဆိုင်ရှင်က ခေါ်မေးသည်။ ကောင်လေးက မပေးကြောင်းငြင်းသည်။ “အလို ငါ့ကို ဘာများထင်သလဲ၊ မင်းတို့လို နာမည်ကျော် စားသောက်ဆိုင်ကြီးက ဒီလို ကလိန်ကကျစ် လုပ်လိမ့်မယ် မထင်ပါလား၊ အေးလေ၊ ထားလိုက်၊ ငါကတစ်ဆင့် သတင်းတွေ ဖြန့်လိုက်ရင် မင်းတို့ ဆိုင် ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်သလဲ”၊ ဆိုင်ရှင်က အမှားပုံစံကို ကြည့်ပြီး ထိတ်သွားသည်။ တိုက်ပုံ၊ ဘန်ကောက်ပုဆိုး၊ ကတ္တီပါဖိနပ်နှင့် လူကြီး လူကောင်းတစ်ယောက်က မမှန်တာမပြောနိုင်ဟု သတ်မှတ်လိုက်သည်။ သူ့စားပွဲထိုးလေးကို ခေါ်သွားပြီး ပိုက်ဆံ ၁၈၀၀ ကျပ်ပေးကာ တောင်းပန်ခိုင်းလိုက်သေးသည်။
အမှန်က အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့်ကြည့်နေသည်။ အမှားက ပြန်အမ်းငွေကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး စားပွဲထိုးကို မကျေမနပ်ဖြင့် ပြောလိုက်သေးသည်။ ထို့နောက် ဆိုင်ထဲက ထွက်လာသည်။ ဆိုင်အပြင်ကိုရောက်လာသည်။ အမှန်က အမှားကို ပြောသည် “ကျုပ်ဗျာ စားထားတာတွေတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိဘူး။ ကြောက်လိုက်တာ” ဟု ပြောလိုက်သည်။ အမှားက ပြောလိုက်သည်
“မင်းတို့ အမှန်တွေ ကြောက်လို့ ငတ်နေချိန်မှာ တို့အမှားတွေကတော့ ဒီလိုပဲ ဟောက်စားခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီကွ”
]]> https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%94%e1%80%ba-%e1%80%94%e1%80%be%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%ba-%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%ac%e1%80%b8/feed/0သတ္တိ ဆိုတာ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%ad-%e1%80%86%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ac/ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%ad-%e1%80%86%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ac/#respond Sat, 30 Mar 2019 06:42:41 +0000 https://www.learningenglishmyanmar.com/?p=524
ကိုယ်တန်ဖိုးထားတာတခုကို ရွေးချယ်လိုက်ပြီး၊ အဲဒါကို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းက တန်ဖိုးမထားဘူး၊ အထင်မကြီးဘူး ဆိုပါတော့။ အဲဒီလိုဆိုရင် ရွေးချယ်ရဲတဲ့ သတ္တိ ရှိရဲ့လား။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် မရွေးဘဲနဲ့ သူများနောက်ကို ယောင်ယောင်မှားမှားနဲ့ ရောပြီးတော့ လိုက်တဲ့သူဟာ သတ္တိမရှိဘူး။ သူများနောက်ကို မလိုက်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ် ကိုယ့်လမ်းကိုကိုယ် ရွေးတဲ့သူဟာ အကြီးမားဆုံး သတ္တိ ရှိတဲ့သူပဲ။ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ် သိပြီးတော့ ကိုယ် မှန်တယ်ထင်တာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေးချယ်ပြီး တာဝန်သိသိ မလုပ်နိုင်သေးသ၍ ဒီလူက တကယ်အင်အားရှိတဲ့လူ၊ တကယ်သတ္တိရှိတဲ့လူ၊ တကယ်အသက်ဝင်နေတဲ့လူ၊ တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်မလာသေးဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ အယူအဆ မတူတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကိုပဲ အယူအဆ မတူတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကို ဝိုင်းပယ်လိုက်ကြမှာ အင်မတန် […]
The post သတ္တိ ဆိုတာ appeared first on Learning English Myanmar.
ကိုယ်တန်ဖိုးထားတာတခုကို ရွေးချယ်လိုက်ပြီး၊ အဲဒါကို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းက တန်ဖိုးမထားဘူး၊ အထင်မကြီးဘူး ဆိုပါတော့။ အဲဒီလိုဆိုရင် ရွေးချယ်ရဲတဲ့ သတ္တိ ရှိရဲ့လား။
ကိုယ့်လမ်းကိုယ် မရွေးဘဲနဲ့ သူများနောက်ကို ယောင်ယောင်မှားမှားနဲ့ ရောပြီးတော့ လိုက်တဲ့သူဟာ သတ္တိမရှိဘူး။ သူများနောက်ကို မလိုက်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ် ကိုယ့်လမ်းကိုကိုယ် ရွေးတဲ့သူဟာ အကြီးမားဆုံး သတ္တိ ရှိတဲ့သူပဲ။
ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ် သိပြီးတော့ ကိုယ် မှန်တယ်ထင်တာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေးချယ်ပြီး တာဝန်သိသိ မလုပ်နိုင်သေးသ၍ ဒီလူက တကယ်အင်အားရှိတဲ့လူ၊ တကယ်သတ္တိရှိတဲ့လူ၊ တကယ်အသက်ဝင်နေတဲ့လူ၊ တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်မလာသေးဘူး။
ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ အယူအဆ မတူတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကိုပဲ အယူအဆ မတူတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကို ဝိုင်းပယ်လိုက်ကြမှာ အင်မတန် ကြောက်တယ်။ သူတို့နဲ့ ကိုယ်နဲ့ အယူအဆ မတူတာ၊ ခံယူချက် မတူတာဟာ သူတို့ကို မလေးစားတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးကန်းတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နားလည်အောင် ပြောပြီး ရန်မလုပ်ပဲနဲ့၊ စိတ်မဆိုးပဲနဲ့၊ ကြောက်ပြီးတော့ လိုက်လျှောတာလည်း မဖြစ်ပဲနဲ့၊ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်ဉာဏ်ကို အဆုံးရှုံး မခံပဲနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုလုပ် နေသွားရမလဲဆိုတာ တော်တော်ကို ဉာဏ်ကြီးကြီးနဲ့ တော်တော်ကို သတ္တိရှိရှိ စဉ်းစားရမယ့် ကိစ္စဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး ဘယ်လို သဘောထားမလဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး ဘယ်လို ဆက်ဆံရမလဲ၊ “ ငါ ဘယ်လိုလူလဲ ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးမယ် ဆိုရင်တောင်မှ သတ္တိ တော်တော်လိုတယ်။ “ ငါ တကယ်ရိုးသားတဲ့သူ ဟုတ်ရဲ့လား ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးကြည့်စမ်းပါ။ သတ္တိ ဘယ်လောက်လိုလဲ ဆိုတာ ရိပ်မိမယ်၊၊ ပြီးတော့ “ ငါဟာ ဘယ်လောက်ထိအောင် ကောင်းတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်လာနိုင်သလဲ၊ ဘယ်လောက်ထိအောင် စိတ်ထား နူးညံ့တဲ့ အေးချမ်းတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ လူတယောက် ဖြစ်လာနိုင်သလဲ ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို မေးကြည့်စမ်းပါ။ သတ္တိ ဘယ်လောက် လိုမလဲလို့၊၊ အဲဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ ရှိရမဲ့ သတ္တိမျိုးကို မွေးသွားနိုင်ပြီဆိုရင် အပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးတော့ ကြီးမားတဲ့ တည်ငြိမ်မှု အေးချမ်းမှု ရှိတဲ့စိတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်သွားမှာ ဧကန်မုချပဲ။ ဒါကြောင့် အပြင်မှာ ရှိနေတာကို ရင်ဆိုင်ဖို့ထက် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာကို ရင်ဆိုင်ဖို့က သတ္တိပိုပြီး လိုအပ်ပါတယ် ဆိုတာကို နားလည်ဖို့ လိုတယ်။
သူ့ဆီက ဘာမှပြန် မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ ကိုယ်ပေးနိုင်တာကို မေတ္တာနဲ့ ပေးနိုင်ဖို့ သတ္တိ လိုပါတယ်။ ငါ့ကို ပြန်ချစ်မှာလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မျိုး မထားဘဲ ကိုယ်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချစ်နိုင်ဖို့ သတ္တိ လိုတယ်။ သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပေးလိုက်တာပဲ။ ကိုယ့်ဘဝထဲမှာ သူ့ကို နေရာပေးလိုက်တာဘဲ။ ကိုယ့်ဘဝထဲမှာ သူ့အတွက် နေရာပေးနိုင်ဖို့ သတ္တိ လိုတယ်၊၊ အရှုံးအမြတ် မတွက်ပဲ ချစ်နိုင်ဖို့ သတ္တိ လိုတယ်။ အနိုင်အရှုံးမရှိပဲ ချစ်နိုင်ဖို့ သတ္တိ လိုတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ သတ္တိ လိုတယ်။ ရာနှုံးပြည့် ရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးကို ပေးနိုင်ဖို့ သတ္တိ လိုတယ်။ တကယ် သတ္တိရှိမှ ချစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ့်ရင်ထဲက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့၊ ကိုယ့်အသိဉာဏ်နဲ့ ကိုယ်မြင်ထားတာ သိထားတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောနိုင်ဖို့ သတ္တိ လိုတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက် ပြောဖို့ သတ္တိ လိုတယ်လို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ထဲရှိတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောနိုင်ဖို့ ရေးနိုင်ဖို့ကိုပဲ သတ္တိ လိုတယ်။
ပိုပြီးတော့ ကောင်းတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း ဖြစ်လာဖို့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ ကြိုးစားရတာ သတ္တိ လိုပါတယ်။ ရိုးသားမှုရှိဖို့ ဆိုတာ သတ္တိ အင်မတန် လိုပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရား ရှိဖို့ ဆိုတာလည်း သတ္တိ အင်မတန် လိုပါတယ်။ တရားမျှတတဲ့နည်းနဲ့ ကိုယ်ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ရဖို့ ကြိုးစားတာ၊ ကိုယ်ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေး တခု ရထားတာကို ဆုံးရှုံးမသွားဖို့၊ တရားမျှတတဲ့နည်းနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ကာကွယ်တာ၊ ထိန်းသိမ်းတာဟာလည်း သတ္တိပါဘဲ။
တခုခုကို ဖန်တီးဖို့ တီထွင်ဖို့ သတ္တိ လိုတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရည်အချင်းလေးတွေကို ကြီးထွားလာအောင် လုပ်တာ၊ ပိုပြီးတော့ လွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်အောင်၊ ပိုပြီးတော့ တာဝန်ကျေတဲ့ တာဝန်သိတဲ့ တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ လူတယောက် ဖြစ်လာအောင် ပုံဖေါ်တာဟာလည်း တီထွင် ဖန်တီးတာပဲ။ ဒါ သတ္တိရှိမှ လုပ်နိုင်တယ်။ ငါဟာ လူသားတယောက်ပါ၊ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ ကိုယ့်ဘဝကို နေသွားနေတဲ့ လူသားတယောက်ပါ ဆိုတဲ့အနေနဲ့ ရပ်တည်ဖို့ ဆိုတာ သတ္တိ အများကြီး လိုတယ်။ သူများနောက်လိုက် မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ် ရပ်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်လမ်းကို ကိုယ်ရှာပြီး သွားနေတဲ့သူ ဖြစ်ဖို့ သတ္တိ အများကြီး လိုပါတယ်။ နေ့စဉ် နေ့စဉ် တနာရီပြီး တနာရီ၊ တမိနစ်ပြီး တမိနစ် တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်ချက် တခုကို ချဖို့ သတ္တိ လိုပါတယ်၊၊
အတွင်းလွတ်လပ်မှုလို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို တကယ် အထိခိုက်မခံဖို့ ထိန်းသိမ်းဖို့က ပိုပြီးတော့ ကြီးမားတဲ့ သတ္တိ လိုအပ်ပါတယ်။
သတ္တိ မရှိရင် သင်ဟာ တကယ်ချစ်တဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အားငယ်နေတဲ့ သူဟာ အားကိုးရမဲ့သူကိုပဲ ရှာတယ်။ တကယ်ချစ်တာ မဟုတ်ဘူး၊၊တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်တဲ့သူ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးနိုင်တဲ့ သူနှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးပဲ ဖြစ်တယ်။ သတ္တိ မရှိတဲ့သူဟာ အားငယ်တတ်တဲ့သူဟာ ယုံကြည်စိတ်ချတတ်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး။ သူများကို ယုံတယ်ဆိုတာ စိတ်ဓာတ်အင်အား ကြီးတဲ့သူမှသာ လုပ်နိုင်တယ်။ မိသားစု အချင်းချင်းတောင် မယုံကြတာ ရှိတယ်၊၊ သတ္တိမရှိတဲ့သူဟာ အမှန်တရားကို စူးစမ်းမှု မလုပ်နိုင်ဘူး။ အမှန်တရားကို ရှာဖွေစူးစမ်းတယ် ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား မှန်ရဲ့လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးနိုင်တဲ့သူမှသာ လုပ်နိုင်တယ်။ သတ္တိ မရှိတဲ့သူဟာ အပြင်မှာ အားကိုးစရာတွေကို လိုက်ရှာနေတယ်။ သူ့အသိဉာဏ်ကို သူ အားမကိုးဘူး။ သတ္တိ မရှိတဲ့သူဟာ ထီထိုးတယ်။ သတ္တိ ရှိတဲ့သူဟာ အလုပ် လုပ်တယ်။
သဘာဝမကျတာကို ယုံကြည်မှုဟာ အယူသည်းမှုပဲ။ ဘာသာရေးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျန်းမာရေးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုရေးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သဘာဝကျရဲ့လား ဆိုတာကို မေးပါ။ သဘာဝကျတာကို လက်ခံပါ။ သဘာဝ မကျတာကို ရဲရဲကြီး ပယ်လိုက်ပါ။ အဲဒါ သတ္တိ ပဲ။
ကိုယ်ဘာကို တကယ် ယုံကြည်သလဲဆိုတာ မသိတဲ့သူ၊ ကိုယ်ဘာကို ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ မသိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ယုံကြည်ချက် ကိုယ့်ခံယူချက် အတွက်နဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ မရပ်တည်နိုင်တဲ့သူဟာ စစ်မှန်တဲ့ သတ္တိ ရှိတဲ့သူ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး၊၊ ကိုယ့်ရဲ့ အစွမ်းအစတွေ ကိုယ့်ရဲ့သတ္တိတွေ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေဟာ ဘယ်လိုဟာတွေလဲ ဆိုတာကို မသိပဲနဲ့ တစုံတယောက်က ကိုယ့်ကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာအောင် သူတို့ ကျေနပ်အောင် ကြောက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တယောက်ယောက်ရဲ့ အကြိုက်အတိုင်း နေပြရတယ်ဆိုရင် အဲဒီလူဟာ စစ်မှန်တဲ့ သတ္တိ ရှိတဲ့သူ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။
တခုခုကို လုပ်တဲ့အခါမှာ “ဘာဖြစ်လို့လုပ်တယ်” ဆိုတဲ့ အရင်းခံ အကြောင်းတရားက ကိုယ့်ရင်ထဲကမှ မလာလို့ရှိရင် အဲဒီအလုပ်ကို သတ္တိရှိရှိ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လုပ်၊ ကျောင်းဆရာပဲလုပ်လုပ် သတ္တိရှိဖို့ လိုတယ်။ ဆရာဝန်လုပ်လည်း သတ္တိရှိဖို့ လိုတယ်။ အရောင်းအဝယ် တခုခု လုပ်မယ် ဆိုရင်လည်း ငါ ရိုးရိုးသားသား ရောင်းမယ်ဝယ်မယ်၊ ငါ့ရဲ့ အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းနဲ့ ငါ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုမယ် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်နိုင်ဖို့ သတ္တိ အများကြီး လိုတယ်။ တကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန် မတရား အမြတ်များများရဖို့ မကြိုးစားပဲ သင့်ရုံလောက် အမြတ်ရရင် တော်ပြီ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ထားနိုင်ဖို့ သတ္တိ လိုတယ်၊၊ ဘယ်လိုအလုပ်ပဲ လုပ်လုပ် ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ရှိနေတာနဲ့ ကိုယ်အပြင်မှာ ပြောနေ ဆိုနေ လုပ်နေတာနဲ့ဟာ ထပ်တူဖြစ်မှသာ သတ္တိ ရှိတဲ့သူလို့ ပြောလို့ရမယ်။
သူများအထင်ကြီးတာ ခံရဖို့၊ သူများကြိုက်ဖို့၊ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ပေးနေတာ လုပ်ပြနေတာ၊ အခွင့်အရေး တခုခုရဖို့ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ တကယ်မကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ပေးနေတာ လုပ်ပြနေတာဟာ သတ္တိ မရှိရာရောက်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ လူတယောက်လို့ ခံစားရတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတယောက် ၊ တန်ဖိုးထားထိုက်တဲ့ လူတယောက်၊ လေစားစရာကောင်းတဲ့ လူတယောက်လို့ ခံစားရတာဟာ သတ္တိရဲ့ အခြေခံဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလေးစားနိုင်ရင် သတ္တိရှိတဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အပေါ်ယံ ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ ရာထူးတို့ကို ကြည့်ပြီးတော့ သတ္တိရှိတဲ့သူလို့ ပြောလို့ မရဘူး။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ချမ်းသာချင်လည်း ချမ်းသာနေမယ်၊ ရာထူးလည်း ရှိချင်ရှိနေမယ်၊ ဒါပေမဲ့ အတွင်းမှာတော့ သတ္တိနည်းတဲ့သူ ဖြစ်နေနိုင်တယ်။
ဂလဲ့စားခြေတဲ့အနေနဲ့ တုံ့ပြန်တာဟာ သတ္တိ မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်ဘဝမှာ ကောင်းတာတွေ များများ ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ ဆိုတာ မှန်ကန်တဲ့ ပြတ်သားတဲ့ ခံယူချက် ဦးတည်ချက် တန်ဖိုးထားစရာတွေ ရှိပြီးတော့၊ အဲဒီ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတာတွေအတွက် သတ္တိရှိရှိ ရပ်တည်နိုင်မှသာ အဲဒီ ကောင်းတာတွေဟာ ဖြစ်လာမယ်။
ကိုယ့်မှာ ဘယ်လိုအင်အားတွေ၊ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ၊ဘယ်လိုပင်ကိုယ်အစွမ်းအစတွေ ရှိသလဲ ဆိုတာ သိရမယ်။ ကိုယ့်အစွမ်းအစ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ကိုယ် ယုံကြည်ရမယ်။ အဲဒီလို ယုံကြည်မှု ရှိပြီးတော့ “ဟောဒါဟာ ငါ့ရဲ့ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း၊ ဟောဒါဟာ ငါ့ရဲ့ ပင်ကိုယ်သဘောထား၊ ဟောဒါဟာ ငါ တကယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်၊ ဒါကို ငါ တကယ်လုပ်မယ်၊ ဒါကို လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိ ငါ့မှာ ရှိတယ်။” လို့ ဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိရမယ်။ အဲဒီလို ယုံကြည်မှုမှာ အခြေခံပြီးတော့ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ် နေသွားရမယ်။ ကိုယ် တန်ဖိုးထားတာကို လုပ်သွားရမယ်။ အဲဒီလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက် အပြည့်နဲ့ နေသွား လုပ်သွားမှသာ သတ္တိဆိုတာ တနေ့တခြား တိုးပွားလာနိုင်တယ်။
ပုံမှန်လေး၊ စိတ်ရှည်လက်ရှည်လေး၊ အေးအေးဆေးဆေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ လွတ်လပ်မှုဘက်ကို တဖြေးဖြေး ရှေ့တိုးသွားနေတာ၊ တနေ့ထက်တနေ့ ပိုပြီး လွတ်လပ်တဲ့သူ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတာ၊ အဲဒါက အခက်ဆုံးအလုပ် ဖြစ်တယ်။ အကြီးမားဆုံး သတ္တိလည်း လိုအပ်တယ်။ အဲဒီသတ္တိမျိုးက အပြင်လူ မမြင်နိုင်ဘူး၊ ကိုယ့်ဘဝထဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာပဲ ဖြစ်နေတယ်။
ငါ ဘယ်လိုလူ ဖြစ်ချင်သလဲ ဆိုတာကို သေသေချာချာ အာရုံပြုပါ။ သိအောင်လုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် ဘယ်လိုလူ ဖြစ်ချင်သလဲ ဆိုတာ သိအောင်လုပ်ပြီး ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့သူ ဖြစ်လာအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပါ။ အဲဒါ အခက်ဆုံးနဲ့ ကျေနပ်စရာ အကောင်းဆုံး အလုပ်ပဲ။ ဒါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် တကယ်ယုံကြည်မှု ရှိတဲ့သူပဲ လုပ်နိုင်မယ်။ ဒါ တကယ့်စွန့်စားခန်းပဲ။
သတ္တိရှိရင် လုပ်လိုက်ပါ။ လွတ်လပ်ချင်ရင် လုပ်လိုက်ပါ။ သတ္တိရှိမှ လွတ်လပ်မယ်။
]]> https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%ad-%e1%80%86%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ac/feed/0စကားကြီး (၁၀)မျိုး https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%85%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ae%e1%80%b8-%e1%81%81%e1%81%80%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8/ https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%85%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ae%e1%80%b8-%e1%81%81%e1%81%80%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8/#respond Sat, 30 Mar 2019 06:06:46 +0000 https://www.learningenglishmyanmar.com/?p=521
စကားပြောဆိုရာ၌ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာစေရန် စကားပြောနည်း ၁၀-မျိုးကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်၊ မြန်မာလူမျိုးတို့က စကားကြီး ၁၀-မျိုးဟု ခေါ်ဆိုကြသည်၊ ယင်းစကားကြီး ၁၀-မျိုး၏ အမည်ကို မုန်တိုင်ပင် ဆရာတော်က မှတ်သားရလွယ်ကူစေရန် သုံးပုံတံချူကျမ်း၌ အောက်ပါအတိုင်း လင်္ကာစီထားပါသည်။ ၁။ ရေကူး ညာတင် ၂။ ကောက်ပင် ရိတ်လှီး ၃။ ရေစီး ဖောင်ဆန် ၄။ အိုးတန် ဆန်ခပ် ၅။ ဆီပွတ် ကျည်ပွေ့ ၆။ ဆင်ဝှေ့ ရန်ရှောင် ၇။ တောင်သူ ယာခုတ် ၈။ ကြက်ဆုတ် ခွပ်ပြစ် ၉။ ရေစစ်သည့်အင် ၁၀။ ခက်တင် မောင်းနင်း အခြင်းဆယ်ပါး ဤစကားကို မှတ်သားဝမ်းတွင်း လေ့စေမင်း။ ၁။ ရေကူးညာတင် ပြောနည်း မြစ်တဘက်မှ […]
The post စကားကြီး (၁၀)မျိုး appeared first on Learning English Myanmar.
စကားပြောဆိုရာ၌ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာစေရန် စကားပြောနည်း ၁၀-မျိုးကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်၊ မြန်မာလူမျိုးတို့က စကားကြီး ၁၀-မျိုးဟု ခေါ်ဆိုကြသည်၊ ယင်းစကားကြီး ၁၀-မျိုး၏ အမည်ကို မုန်တိုင်ပင် ဆရာတော်က မှတ်သားရလွယ်ကူစေရန် သုံးပုံတံချူကျမ်း၌ အောက်ပါအတိုင်း လင်္ကာစီထားပါသည်။
၁။ ရေကူး ညာတင်
၂။ ကောက်ပင် ရိတ်လှီး
၃။ ရေစီး ဖောင်ဆန်
၄။ အိုးတန် ဆန်ခပ်
၅။ ဆီပွတ် ကျည်ပွေ့
၆။ ဆင်ဝှေ့ ရန်ရှောင်
၇။ တောင်သူ ယာခုတ်
၈။ ကြက်ဆုတ် ခွပ်ပြစ်
၁၀။ ခက်တင် မောင်းနင်း အခြင်းဆယ်ပါး
ဤစကားကို မှတ်သားဝမ်းတွင်း လေ့စေမင်း။
၁။ ရေကူးညာတင် ပြောနည်း
မြစ်တဘက်မှ လိုရာဆိပ်ကမ်းသို့ ကူးလိုလျှင် မြစ်ညာက တင်၍ကူးမှ လိုရာသို့ ရောက်သကဲ့သို့
မိမိအလိုရှိရာသို့ရောက်အောင် အထက်က တင်ကူး၍ ပြောခြင်းသည် ( ရေကူးညာတင် ပြောနည်း ) မည်၏။
အူထုံးရောဂါသည်ကို ကုရာ၌ ဇီဝက-ပြောသောစကားကို သာဓကထုတ်အပ်၏။
၂။ ကောက်ပင်ရိတ်လှီး ပြောနည်း
စပါးရိတ်လျှင် ကောက်ပင်ကို လက်တဆုပ်ဖြင့် ဆုပ်သိမ်းကာ တံဇဉ်ဖြင့်အရင်းမှ ဖြတ်၍ ရိတ်ယူသကဲ့သို့ တဘက်လူ၏ စကားကို သိမ်းကျုံးဖမ်းယူပြီးမှ အရင်းကဖြတ်၍ ပိုင်လောက်အောင် ပြောဆိုခြင်းသည် (ကောက်ပင်ရိတ်လှီး ပြောနည်း ) မည်၏။
သူဌေးသား ၂-ယောက်နှင့် ဗျိုင်းပုံဝတ္ထုကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၃။ ရေစီးဖောင်ဆန် ပြောနည်း
ဖောင်ကြီးသည် အညာသို့ ဆန်သောကာလ လိုရာဆန္ဒရှိသမျှကို တင်ယူ၍ ဖြည်းညင်းသာယာစွာ ဆန်လျှင် လိုရာအရပ်သို့ ရောက်နိုင်သကဲ့သို့
စကားအရာတွင်လည်း ဥပမာ-ဥပမေယျတို့ဖြင့် ဖြည်းညင်းသာယာစွာ လိုရာရောက်အောင် ပြောဆိုခြင်းသည် (ရေစီးဖေညင်ဆန် ပြောနည်း ) မည်၏။
ဟံသာဝတီဘုရင် ရာဇာဓိရာဇ်က ( အဆွေတော် ) ဟု ရေးသားသည်ကို ဒွါရဝတီမင်းက မကျေနပ်၍ ဟံသာဝတီ သားတို့က ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၄။ အိုးတန် ဆန်ခတ် ပြောနည်း
အိုးနှင့်ဆန်သည် တန်အောင်ချက်လျှင် နူးနပ်စွာ သုံးဆောင်ရသကဲ့သို့
စကားအရာတွင်လည်း မယုတ်မလွန်နှင့် လိုရင်းရောက်အောင် ပြောဆိုခြင်းသည် ( အိုးတန် ဆန်ခတ် ပြောနည်း) မည်၏။
သားရွှေအိုးထမ်းလာသည်ကို မြင်လိုပါသည်-ဟု ပြောဆိုသော သုဝဏ္ဏသာမ၏ မိဘ ၂-ပါး ပြောဆိုပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၅။ ဆီပွတ် ကျည်ပွေ့ ပြောနည်း
ဆီကို ရအောင် ပွတ်သည့်အခါတွင် အထပ်ထပ်အခါခါ ပွတ်ရသကဲ့သို့
အလိုရှိသောစကားကို အထပ်ထပ် ပြောဆိုခြင်းသည် ( ဆီပွတ်ကျည်ပွေ့ ပြောနည်း ) မည်၏။
ဘုရားပိန္နဲတိုင်ကိစ္စ ဆွေးနွေးရာ၌ မကျည်းနှစ်လဲ ကောင်း၊ ကျွန်းလဲ ကောင်း။
ရှားနှစ်လဲ ကောင်း၊ ကျွန်းလဲ ကောင်း-ဟု ပြောဆိုပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၆။ ဆင်ဝှေ့ ရန်ရှောင် ပြောနည်း
ဆင်ဝှေ့မည်ဟု လိုက်လျှင် လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း တိမ်းရှောင်က ချမ်းသာသကဲ့သို့
စကားအရာတွင်လည်း မိမိအဖို့ ဘေးရောက်မည့် စကားကို ရှောင်လွှဲ၍ ပြောဆိုခြင်းသည် ( ဆင်ဝှေ့ရန်ရှေင် ပြောနည်း ) မည်၏။
ရက်မအောက် မြေကြီးအထိ ရွှေချထားသော အိမ်ရှေ့မင်း၏ ကျောင်းမှ ရွှေများကို မြို့ဝန်က အဖျက်ခိုင်းရာ အိမ်ရှေ့မင်း စိတ်ဆိုးသည်ကို ပြေလည်အောင် လျှောက်ထားသော မြို့ဝန်၏စကားကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၇။ တောင်သူ ယာခုတ် ပြောနည်း
တောင်သူတို့သည် ယာခုတ်လျှင် ခြုံငယ် သစ်ပင်ငယ်တို့ကို ဦးစွာ ရှင်းလင်းခုတ်ထွင်ပြီးမှ သစ်ပင်ကြီးငယ်များကို လှဲသကဲ့သို့
စကားအရာတွင်လည်း ဦးစွာ စကားငယ်ကိုပြော၍ နောက်မှ စကားကြီးများကို ပြောခြင်းဖြင့် အနိုင်ယူခြင်းသည် (တောင်သူ ယာခုတ် ပြောနည်း ) မည်၏။
အမတ်ကြီးလေးဦးနှင့် မဟောသဓာသုခမိန်တို့ ဥစ္စာနှင့်ပညာ ဘယ်ဟာက-မြတ်သည် ဟူသော အငြင်းပွားပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၈။ ကြက်ဆုတ် ခွပ်ပစ် ပြောနည်း
ကြက်တို့၏သဘောသည် ခွပ်မည်ပြုသောအခါ နောက်သို့ဆုတ်ဟန်ပြု၍ တကယ်ခွပ်သောအခါမှသာ စီး၍ခွပ်သကဲ့သို့စကားအရာတွင်လည်း သူ့အလိုကို လိုက်တန်သ၍ လိုက်ပြီးလျှင် စီးသာသောအခါမှ စီးလျက် ပြောသောစကားမျိုးသည် ( ကြက်ဆုတ် ခွပ်ပစ် ပြောနည်း ) မည်၏။
ကဝိသေတ္တု မဉ္ဇူသာကျမ်း၌ ဖော်ပြပါရှိသော တရုတ်ငရွှေကြည်၏ မီးလောင်ကိစ္စအတွက် တရုတ်သံများနှင့် အမတ်ကြီးဦးပေါဦးတို့ အပြန်အလှန် ပြောဆိုပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၉။ ရေစစ်ပမာ စကားပြောနည်း
ဓမ္မကရိုဏ်းခေါ်သော ရေစစ်ကို ရေတွင်နှစ်၍ ရေပြည့်လျှင် အပေါက်ကို လက်ဖြင့် ပိတ်ယူပါက ရေမထွက်နိုင်သကဲ့သို့
တဘက်လူ၏ စကားကို ပိတ်မိအောင် ပြောဆိုခြင်းသည် ( ရေစစ်ပမာ စကားပြောနည်း ) မည်၏။သူငယ်လေးယောက်နှင့် သူအိုကြီးတို့ ယုံတမ်းစကား ပြောကြားပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
၁၀။ ခက်တင် မောင်းနင်း ပြောနည်း
သူ့စကားကို ဟုတ်၏လည်း မဆို၊ မဟုတ်ဟုလည်း မဆိုဘဲ မတင်တကျ ပြောဆိုခြင်းသည် ( ခက်တင် မောင်းနင်း ပြောနည်း ) မည်၏။ဤသူ ငါ့တူ-မဟုတ်ဟု မည်သူပြောသနည်း-ဟု တောင်ဖီလာဆရာတော် ပြောကြားပုံကို သာဓက ထုတ်အပ်၏။
မှတ်ချက်။ စကားကြီး ၁၀-မျိုးအကြောင်း ပြဆိုသော ပုံသက်သေ သာဓကဝတ္ထုများကို မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၃)တွင် အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြပါရှိသည်။ ထိုကျမ်း၌ လေ့လာကြည့်ရှုကြပါကုန်။
( အောင်ပွဲရ ကဗျာ )
၁။ ရေကူးညာတင်၊ ပြောရိုးတွင်၊ ဉာဏ်ယှဉ်ပါက အောင်ပွဲရ။
၂။ ကောက်ပင်ရိတ်လှီး၊ ပြောဆိုနည်း၊ ဉာဏ်မှီးပါက အောင်ပွဲရ။
၃။ ရေစီးဖောင်ဆန်၊ ပြောဆိုဟန်၊ ဝေဖန်နိုင်းဆ အောင်ပွဲရ။
၄။ အိုးတန်ဆန်ခတ်၊ ပမာဟပ်၊ ပြောတတ်ပါက အောင်ပွဲရ။
၅။ ဆီပွတ်ကျည်ပွေ့၊ ပြောဆိုလေ့၊ လက်တွေ့မှန်လှ အောင်ပွဲရ။
၆။ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်၊ ပမာဆောင်၊ လူ့ဘောင်လောက အောင်ပွဲရ။
၇။ တောင်သူယာခုတ်၊ ညွှန်းဖော်ထုတ်၊ မယုတ်မှန်လှ အောင်ပွဲရ။
၈။ ကြက်ဆုတ်ခွပ်ပစ်၊ ထုံးစနစ်၊ စင်စစ်မှန်လှ အောင်ပွဲရ။
၉။ ရေစစ်သောလား၊ ပမာထား၊ စကားဆိုက အောင်ပွဲရ။
၁၀။ ခက်တင်မောင်းနင်း၊ ပြောဆိုခြင်း၊ မယွင်းမှန်လှ အောင်ပွဲရ။
Credit to Dhamma ပီတိ
]]> https://www.learningenglishmyanmar.com/%e1%80%85%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%ae%e1%80%b8-%e1%81%81%e1%81%80%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8/feed/ 0